Oge Mberede nke Ọpụpụ Ọpụpụ | Martech Zone
Ọnwụ Mberede nke Deathzụ ahịa Ọpụpụ
Thursday, January 30, 2014 Douglas Karr
SBA na-eme atụmatụ na a na-etinye ụlọ ọrụ azụmaahịa ọhụrụ 600,000 kwa afọ. Ọ bụghị ọtụtụ n’ime ha na-erite uru site na aha akara dịka IBM ma ọ bụ Coca Cola. Iji lanarị, ha ga-achụ nta maka azụmahịa ọhụrụ.
Ọbụna nnukwu ụlọ ọrụ dịka EMC, Cisco na Hewlett Packard nwere nnukwu ìgwè ndị raara onwe ha nye maka ịchọta azụmaahịa ọhụrụ na ntọala ha arụnyere yana ndị ahịa ọhụụ. Enweghị usoro maka ịtụ anya na njirisi ihe ndị metụtara ya, ọ bụ ntụgharị ọ bụla maka onwe ha, nke na-adịghị arụ ọrụ nke ọma dịka usoro nke na-eji ihe ọmụma nke otu ahụ iji mee ka mgbalị niile na-atụ anya ka mma karịa ọrụ ọ bụla.
The inbound marketing industrylọ ọrụ na-eme onwe ha nnukwu nsogbu mgbe ha debere onwe ha dị ka ụzọ dị ọnụ ala karịa ahịa ọpụpụ. Ahụmahụ anyị na ndị ahịa egosiwo ugboro ugboro na njikọta nke abụọ na-ewusi nke ọ bụla ike.
Inwe irè inbound ahịa atụmatụ nwere ike inye mma branding na-ewu ntụkwasị obi, visibiliti na ikike nke a ụlọ ọrụ. O nwere ike ichikota ndi ichoro na ichota na ndi mmadu na ndi mmadu, na-achikota data omume na ha, ma nye ndi otu ndi mmadu aka na ndu nke ha ghotara nke oma n'oge ebe olile anya icho ahia.
Inwe irè atụmatụ ahịa ọpụpụ mee ka usoro inbound gị dị ngwa site na ịnye aka gị na ụzọ mbata. Onye na - ere ahịa na - apụ apụ nwere ike ịme mmekọrịta na atụmanya ahụ, kụziere ha ihe, ma zaghachi nke ọma na mgbochi ọ bụla atụmanya nwere.
Ọpụpụ n'ahịa nwere ọtụtụ uru… enwere ike ịmegharị ya n'ụzọ dị mfe, gbanye ma gbanyụọ, ma ọ bụ mụbaa ma belata iji dozie mkpa ahụ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịchọ itinye ego dị elu, nsonaazụ ya kwesịrị ịbụ nke a na-ahụ anya, ngwa ngwa ma dị mma.
tinye a ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu dị ka ndị na-akwado anyị Right Na mmekọrịtanwere amaghị usoro management dị ka TinderBox (Ọzọkwa anyị haziri nzukọ), na i nwere ike dịkwuo arụmọrụ nke gị outbound mgbalị budata… mbenata oge gị outbound otu nwere na-emefu na ndutịm aga-eme. Nkwado ahịa na-emechi ọdịiche arụmọrụ ebe ndị na-abata na mpụga na-ezute.
Tags: inbound marketingahia n'èzíNkwado ire ahịa
Iji Digital Asset Management mee ka Social Nkwalite
Uru nke Mgbakwunye Ahịa
Feb 2, 2014 na 4:45 PM
Ọpụpụ ahịa bụ otu m si wulite azụmaahịa m na mbu, enyerela m ọtụtụ ndị ọkachamara aka na ego aka iwulitekwa azụmaahịa ha. Ọ bụghị naanị ịkpọ oku, mana izipu usoro mgbasa ozi omenala. Ọ na-arụ ọrụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka mụ na ọtụtụ puku ndị ọzọ. Eziokwu zuru oke, enwere ọrụ dị ukwuu, mana njikọta ọpụpụ emere na klaasị na ọkachamara inbound na-arụ ọrụ nke ọma maka ọtụtụ azụmaahịa.
Feb 2, 2014 na 5:56 PM
Ekwenyere @stephenwanderson: disqus!
Feb 17, 2014 na 6:55 PM
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ọchị, etu usoro a si enweta ọtụtụ ọjọọ PR, mgbe ọ ga-adị irè.
Feb 5, 2014 na 6:16 PM
N'ezie, nnukwu ebe Doug! Inbound na-arụ ọrụ mgbe ị na-aga n’ihu ndị maara na ha nwere nsogbu. Mana imirikiti mmadụ amaghị na ha nwere nsogbu ruo mgbe ha hụrụ ụzọ ọzọ na steeti ugbu a. Nke ahụ bụ ihe ọpụpụ na-emere gị. Na ahia anyi, Facebook bu uzo di itunanya iji gha ahia ahia. Na FB anyị nwere ike ịchọpụta ndị ọ bụla bụ ndị enyi nke ndị ahịa anyị dị ugbu a ma ọ bụ ndị na-ekerịta njirimara nke ndị ahịa anyị.
Akwa post na nghọta.